ပျားမွေးမြူထုတ်လုပ်ရာတွင် အောက်ပါအခြေခံသဘောတရားများ သတိပြုရမည်ဖြစ် - 文化 - Myanmar home -德宏缅文网
a&TvDusif;csdefaq;½Hkudk ,ckESpf 'DZifbmvü w&m;0ifzGifhvSpfrnfjzpf
wwd,tMudrfajrmuf w&kwf-tmqD,H v,f,mu@EkdifiHwumyl...
ပျားမွေးမြူထုတ်လုပ်ရာတွင် အောက်ပါအခြေခံသဘောတရားများ သတိပြုရမည်ဖြစ်
အသေးစားပျားမွေးမြူရေးစခန်းများမှာ ပျားဘုရင်အသုံးပြုစဉ် ကာလကြာရှည်စွာ ကိုယ်တိုင်မွေးမြူကိုယ်တိုင်အ သုံးပြုသည့်အခြေအနေကို ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။ ဒေသအသီးသီးမှပျားမွေးမြူရေးစခန်းမှ ကျွမ်းကျင်သော သိပ္ပံ နည်း ကျပျားဘုရင်မွေးမြူနည်းကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သောပျားဘုရင်မွေးမြူဌာနတစ်ခုတည်းမှ ပျားဘု ရင်ကို ထောက်ပံ့ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုမှသာလျှင် ပျားဘုရင်၏အရည်အသွေးနှင့်အမျိုးအစားမျိုးစိတ်ကို အာမခံပေး နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး ပျားမူရင်းမျိုးစိတ်မွေးမြူစခန်းနှင့် မျိုးပွားပျားမွေးမြူထုတ်လုပ်ရေးစခန်းစသည်ဖြင့် ကျွမ်းကျင်သော မျိုးကောင်းမျိုး သန့်ပြုစုဌာနမှ မျိုးပွားပျားအုပ် မွေးမြူရာတွင် သိပ္ပံနည်းကျရွေးချယ်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ပျားဘုရင်၏ နောက်ဆက်များမှ တစ်ဆင့်ရလဒ်ပမာဏကိုခန့်မှန်းခြင်းမှာ မျိုးပွားပျားအုပ်ရွေးချယ်ခြင်း၏ အခြေခံ အချက်ဖြစ်ကာ ပျားအုပ်တစ်ခုတည်း၏ လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် ပျားမွေးမြူခြင်း၏အတွေ့အကြုံများဖြင့်သာ ရွေး ချယ်ရန် မသင့်လျော်ပါ။ ဒုတိယအချက်မှာ ပျားထုတ်လုပ်ရေးစခန်းအတွက် ကျွမ်းကျင်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ပြုစုဌာနမှ ထောက်ပံ့သော ပျားဘုရင်ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းသည် ပျားမွေးမြူရေးစခန်း၏ စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ချက်မှာ ကျွမ်းကျင်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ပြုစုဌာနတွင် ထုတ်လုပ် သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို တင်းကျပ်စွာ သီးသန့်ခွဲခြားထားသော မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ပြုစုစခန်းထားရှိရမည်ဖြစ် သည်။ သို့ မဟုတ် လူအားဖြင့်မျိုးပွားသောနည်းပညာဖြင့် ပျားဘုရင်နှင့် ပျားထီး၏မျိုးပွားခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးရမည်။ ထိုမှသာလျှင် ပျား ဘုရင်၏ မျိုးစိတ်နှင့် အရည်အသွေးကို အာမခံပေးသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပျားစိုက်ပျိုးသူအားလုံးကို မျိုးကောင်းသွင်းစဉ် တရုတ်ပျားမွေးမြူရေးနီးစပ်ရာမှမျိုးကောင်းသွင်းသည့် အခြေခံသ ဘောတရားအရ ဒေသခံတရုတ်ပျားမျိုးကောင်းထိန်းသိမ်းရေးစခန်း သို့မဟုတ် မျိုးကောင်းမျိုးပွားစခန်းမှ ယူသွင်းထား သော မျိုးကောင်းပျားဘုရင် သို့မဟုတ် ပျားအုပ်ကို ဦးစားပေးမွေးမြူရမည်ဖြစ်သည်။ ပြင်ပမှမျိုးသွင်းခြင်းများမပြုလုပ် ရပါ။ မဟုတ်ပါက ပျားရောဂါပိုးကူးစက်မှုများ ဖြစ်ပွားတတ်ကြောင်း သိရပါသည်။
www.371zy.com မှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတက်ဟုန်းပြည်နယ်ခွဲပါတီကော်မတီပြန်ကြားရေးဌာန တာဝန်ယူပြုလုပ်သည်။
Dehong Dehong Internet media group News contractor Copyright © 2014 Dehong.Cov.cn, All Rights Reserved
Yunnan ICP Docket No. 2008-016 former No. 08100511 word cloud new network